ISOFTWARE EPHEZULU YOYILO LWEGARAJI EYI-11 (YASIMAHLA KUNYE NEHLAWULELWEYO) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Isoftware ephezulu yoyilo lweGaraji eyi-11 (yasimahla kunye nehlawulelweyo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sesoftware ephezulu yoyilo lwegaraji kubandakanya zombini ii -apps zasimahla nezihlawulelweyo zokucwangciswa kwegumbi lakho, ukubonakala kunye nokugcinwa kweemfuno.
Igaraji yakho ibalulekile njengayo nayiphi na indawo yekhaya lakho. Ayinakusetyenziswa kuphela njengendawo yokupaka izithuthi zakho, kodwa inokusetyenziswa njengokugcina izinto zakho, indawo yezinto ozithandayo okanye umasifundisane. Nokuba ukhetha ukwenza ntoni ngegaraji yakho, kubalulekile ukuba uyicwangcise ngononophelo kwaye ufumane yonke into ilungelelaniswe ngokweemfuno zakho.
Ukucwangcisa naluphi na uhlobo lwendawo, okanye igaraji kule meko, kunokuba ngumsebenzi omkhulu. Ngethamsanqa, zininzi iinkqubo zesoftware ezikhoyo kwimarike ezinokukunceda ufezekise uyilo lwegaraji ocinga ngalo ekhaya. Isoftware yoyilo elungileyo iya kukunceda wenze izicwangciso kunye nolwakhiwo ngokulula, ngelixa ukhupha uqikelelo kunye nobunzima besigaba sokucwangcisa. Kwaye ekubeni uninzi lwezi nkqubo zoyilo zinokusetyenziselwa ukwenza i-3D's photorealistic 3D, unokubona uyilo lwakho ngokulula kwaye ulutshintshe ngokweemfuno zakho kunye neemfuno zakho.
Isoftware ephezulu yeGaraji yoyilo-uKhetho lwaSimahla
I-Bighammer Yenzele ngokwakho iGaraji yeGaraji
Umyili waseGaraji waseMelika uMyili
Isoftware ePhakamileyo yoyilo lweGaraji-Iinketho ezihlawulelweyo
Umyili we-Elecosoft 3D yoyilo lweKhaya
UMyili oyiNtloko woMyili weKhaya
Apha ngezantsi, sikunika uluhlu lwethu lwesoftware yoyilo lwegaraji yasimahla kunye nehlawulelwayo kwimarike:
Iinguqulelo zasimahla zesoftware yoyilo ngamanye amaxesha zanele ukuvelisa iiplani ezipheleleyo ze-2D kunye nemibono ye-3D njengoko uninzi lwezi nkqubo lubandakanya zonke izinto ezisisiseko zokuzoba ngoncedo olwenziweyo kunye nokuyilwa. Kwezinye iimeko, iiwebhusayithi zinikezela ngeenguqulelo zamahhala ezibandakanya zonke iimpawu zabalingani babo abahlawulwayo, kodwa ungayisebenzisa kuphela ixesha elithile.
Nalu uluhlu lwesoftware efanelekileyo yegaraji onokuzama ukuyifumana simahla:
Sketch Up yenye yezona software zenziwe zoyilo zicetyiswayo ziyafumaneka kwintengiso. Iza zombini simahla kunye neenguqulelo ezininzi ezihlawulelweyo kwaye ityala linokukhutshelwa ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yabo. Ukuba awufuni ukufaka inkqubo, unokukhetha ukusebenzisa esi sicelo kwisikhangeli sakho sewebhu.
Eyona nto ingcono ekunokubonelelwa nguSketch Up kukuba nokuba usebenzisa ingxelo yasimahla, usenokonwabela amanqaku ayo, kodwa lixesha elinomda. Kucatshangelwa njengenye yezona zixhobo eziphambili zokucwangciswa kwegaraji kuba unokwenza ngokulula izicwangciso zomgangatho, uyilo kunye nemizobo ye-3D, nokuba awunalo ulwazi lwangaphambili malunga nayo nayiphi na enye uyilo lwesoftware- enkosi kubasebenzisi bayo obunobungane. Ngezixhobo zayo ezinomdla ungasebenzisa le software ukwenza ifayile ye- uyilo lwegaraji oluqhotyoshelweyo .
Ukuqala iprojekthi kwiSketch Up kuya kufuna ukuba uzobe okanye uzobe isicwangciso sakho somgangatho okanye uyilo kwimbonakalo ephezulu. Emva koko ukusuka apho, unokunikezela ngemodeli yakho ye-3D. Nangona uSketch Up enolungelelwaniso oluzenzekelayo kunye nomfanekiso olula we-snap kwimigca, le software ifuna ukuba uzobe iqokobhe lesicwangciso sakho somgangatho ukusuka ekuqaleni-okuthetha ukuba iindonga mazitsalwe ngomgca. Ubungakanani bodonga bunokuhlengahlengiswa ngesandla usebenzisa ibhokisi yemilinganiselo emazantsi escreen apho ungangena khona imilinganiselo yakho.
Ngokubanzi, ekuphela kwemiyalelo esisiseko ekufuneka uyazi ukuqala umzobo we-2D kunye nembono ye-3D kwiSketch Up sisixhobo somgca / sokuzoba (zoba imigca usebenzisa ipensile enjenge icon), iseti (ekuvumela ukuba ubeke ingqonge umda ukuya kwifom - iluncedo ngokukodwa ekudaleni iindonga), tyhala kwaye utsale isixhobo (ukhuphela umzobo wakho phezulu okanye ezantsi ukuze uwenze ube mithathu), isixhobo sokuhambisa (sikuvumela ukuba ujonge izinto kumzobo wakho).
Ukwenza isicwangciso sakho segaraji sineenkcukacha ezingaphezulu, ungongeza ezinye izinto zoyilo ezinje ngeefestile, iingcango, ifanitshala, izixhobo, ukugcinwa kunye nezixhobo ngokukhuphela iimodeli esele zenziwe kwigumbi lokugcina likaSketch Up's 3D. Ezi zinto zinokungeniswa kwimodeli yakho simahla-kufuneka uqhagamshelwe kwi-intanethi ukuyisebenzisa. Ezinye izinto ezigqityiweyo kunye nokwenziwa njengamatye, iphepha lodonga, ilaphu, ukhuni, isinyithi kunye nepeyinti kunokukhethwa kulwakhiwo lwazo olubanzi olwenziwe kwilayibrari ebonakalayo.
Unokudlala kunye neembono zesicwangciso sakho segaraji ukuze ukwazi ukuyihlela ngocoselelo, ngekona ngekona. Enye into eyongeziweyo yeSketchUp kukuhamba ngokuhamba, okwenza ukuba uthathe ukhenketho olubonakalayo lwemodeli yakho. Oku kwenza ukucwangciswa kwegaraji kunomdla ngakumbi kwaye kwangaxeshanye, unokucwangcisa ngokufanelekileyo indawo ngononophelo kwaye uqiniseke ukuba iyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ezithile.
Umcwangcisi woMgangatho uyilo kunye nesoftware yokucwangcisa enokusetyenziselwa kungekuphela ukucwangciswa kwegaraji kodwa kulo naluphi na uhlobo lwendawo okanye indawo. Le software inokusetyenziselwa ukwenza izicwangciso zomgangatho wokusebenzisana kunye noyilo oluneenkcukacha kunye neembono. Umcwangcisi woMgangatho ubonelela ngeefomathi ze-2D kunye ne-3D eziluncedo kakhulu ekunikezeleni umbono opheleleyo wendlela ofuna igaraji yakho ibukeke ngayo.
Le nkqubo yesoftware kulula ukusebenza nayo kwaye ivelise iziphumo ezinomtsalane kakhulu. Ngapha koko, Olunye lophononongo oluthandekayo kwiwebhusayithi yabo luthi uMcwangcisi woMgangatho unje nge-AutoCad kunye neSims zidityanisiwe. Kunzima ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo kwaye isebenza ikakhulu usebenzisa ukutsala kunye nokwehla kwemiyalelo. Ungazoba iiplani zomhlaba kumoya ovuthuzayo okanye usebenzise umhleli wazo onomdla onokuthi isicwangciso sakho somgangatho silungele ngemizuzu.
ukucela abahlobo ukuba babe ngumtshakazi
Ukuphuhlisa uyilo lwe-2D kwisicwangciso somgangatho esineenkcukacha kwakhona akunangxaki. IsiCwangcisi soMgangatho sinendawo yokuZenzekelayo ekuvumela ukuba uhombise iiplani zakho zomgangatho ngonqakrazo olunye. Unganikezela ngesicwangciso sakho somgangatho usebenzisa lo myalelo kwaye ulungele ngaphandle kwexesha. Kodwa ukuba unenkcukacha kwaye uyilo oluthile lwegaraji engqondweni, unokukhetha ifenitshala, izixhobo kunye nezixhobo nganye nganye kwilayibrari yazo ebanzi enezinto ezingaphezu kwe-150,000 ezilungiselelwe iimodeli onokukhetha kuzo.
IsiCwangcisi soMgangatho sikwenza ukuba uvelise imbonakalo ye-3D yefoto kunye nemifanekiso emangazayo yemifanekiso kwi-2D yakho yemizobo yokusebenza. Kwabo bakwishishini loyilo lwegaraji, imizobo yefomathi yokubonisa ibaluleke kakhulu ngokubhekisele kwintengiso kunye nokubeka iiprojekthi kubathengi abanokubakho. Ngelixa labanini bamakhaya, iimbono ezinikezelweyo kulula ukuziqonda xa kuthelekiswa nemizobo yobugcisa.
Umcwangcisi woMgangatho usebenza kwikhompyuter ye-desktop usebenzisa isikhangeli, kodwa ikwanayo nohlobo lwenkqubo exhasa izixhobo ezinje ngeePhones kunye neePads. Eli nqaku likuvumela ukuba ujonge izicwangciso zakho naphi na kwaye iluncedo ngakumbi xa ufuna izinto kunye nabanikezeli kuba unekopi yoyilo lwakho esele ikho. Ungabhalisela uhlobo lwasimahla kwiwebhusayithi yabo ekuvumela ukuba wenze iprojekthi enye. Umcwangcisi woMgangatho ukwakhona kuhlobo oluhlawulelweyo, kodwa ingxelo yasimahla isebenza kakuhle ngakumbi ukuba ufuna kuphela izicwangciso kunye nemizobo yeprojekthi yokulungisa igaraji.
I-Big Hammer Yenzele uMyili weGaraji yinkqubo yesoftware egxile ngokukodwa kuyilo, ukucwangcisa kunye nokulungiselela igaraji. Yinkqubo yewebhu, oko kuthetha ukuba ungayisebenzisa kwisikhangeli kwaye ayifuni ukuba ifakwe kwikhompyuter yakho. Nangona kunjalo, isebenza kuphela kwi-Intanethi Explorer.
Isoftware yoyilo lwegaraji kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni amava angaphambili kuyilo. Kulula ukuyiqonda, ine-interface yomsebenzisi enobungane kwaye inomdla, ikwenza ukuba uyile nasiphi na isithuba segaraji ukusuka ekuqaleni ngaphandle kwengxaki. Ikwafuna ikakhulu iindlela zokucofa kunye nokutsala nazo, ke unokulindela ukufumana isicwangciso sakho somgangatho silungile kwi-jiff.
Le nkqubo yesoftware ineenkcukacha njengoko inokufumana kwaye ibonelela ngeetoni zezinto esele zenziwe, izinto zoyilo, izixhobo kunye nokugqitywa onokufuna ukuyila igaraji. Unokukhetha kwizixhobo ezisekwe kwiikhathalogu zemveliso yokwenyani. Yonke into yokwakha okhetha ukuyifaka kumzobo wakho, uluhlu lwamaxabiso okwenyani lubandakanyiwe. Ukongeza, izicwangciso zichaza nobungakanani beemithi ozifunayo, iintlobo zophahla, iiposti, iifestile neengcango. Ngaloo ndlela, unokuqiniseka ukuba uyilo lwegaraji lubonisa ngokuchanekileyo indawo ehlangabezana nazo zonke iimfuno zakho kunye neemfuno zakho.
I-Big Hammer Zenzele ngokwakho uMyili weGaraji unemibono emininzi kwimizobo enjeJonga iSicwangciso, ukuJongwa kokuBekwa kwePosi, ukuJongwa kwe3D kunye nokuJongwa kweMilinganiselo.Unenketho yokuvelisa ushicilelo olunenkcukacha olunokusetyenziselwa iimvume zokwakha. Ukuseta ukubonwa kwe-3D ikwafumaneka enokusetyenziselwa ukuvelisa izicwangciso zeefomathi kunye nembono yeefoto. Ngaphandle kwemizobo yokusebenza kunye neembono ze-3D, le software yoyilo inokusetyenziselwa ukuvelisa amanye amaxwebhu okwakha anjeGcwalisa iBhili yezixhobo, iiNgxelo zeMetric kunye noLuhlu lokusetyenziswa kweMathiriyeli.
ilokhwe yomtshato yomfazi okhulelweyo
IBigHammer ineentlobo ngeentlobo zeenkqubo ezisekwe kwi-Intanethi onokuzisebenzisa ukuyila zonke iintlobo zezinto ngaphakathi nakwikhaya lakho. Inkqubo yoMyili weGaraji yenye yeendlela eziphambili ezivela kwinkampani oza kuyisebenzisa. Le nkqubo ikuvumela ukuba ulungiselele igaraji esekwe kwizixhobo ofuna ukuzisebenzisa kwiprojekthi yolwakhiwo kunye nokubekwa kweengcango kunye nezinye izinto.
Igaraji elula yinkampani egxile kuyilo, ukuvelisa kunye nokufaka iinkqubo zokugcina ezomeleleyo nezikumgangatho ophezulu kwiigaraji. Inkampani ekuqaleni yaqala ukuvelisa iinkqubo zokugcina kodwa zadibanisa uyilo lwegaraji. Banokukunceda ukuba uneemfuno zoyilo, kodwa bakwabonelela ngesixhobo esisebenzayo sokuyila esikwi-intanethi onokuthi usisebenzise ukucwangcisela eyakho yokugcina igaraji inkqubo. Eyona nto intle malunga nesoftware kukuba ungayisebenzisa simahla kwaye ugcine uninzi loyilo njengoko ufuna xa usenza iakhawunti yegaraji elula. Ukongeza, igaraji elula yinkqubo esekwe kwiwebhu ethetha ukuba ungayisebenzisa kulo naluphi na uhlobo lwesikhangeli ukuba nje uqhagamshele kwi-intanethi.
Igaraji elula yenza ukuba ukucwangciswa kwegaraji kukhawuleze kwaye kube lula. Iwebhusayithi yabo ibonelela ngezifundo ezifutshane zevidiyo eziza kukuhambisa kwinkqubo yoyilo lwegaraji. Isoftware ikwabonelela ngeendlela ezimbini ezilula zokuqalisa kwiprojekthi yoyilo lwegaraji. Inye kukuqala ngepakeji okanye itemplate esele ilungile onokuyihlela kwaye uyenze ngokwezifiso zakho. Ungawutshintsha umbala, ubungakanani kunye noqwalaselo, okanye ukongeza kwaye ususe iimveliso ngokusekwe kwiimfuno zakho zoyilo lwegaraji. Olunye ukhetho kukwenza eyakho kwasekuqaleni. Unokukhetha iindlela ezahlukeneyo zekhabinethi, indawo yokusebenza kunye nezixhobo zokusebenza ukwenza isisombululo esifanelekileyo sokugcina esidibana nokunambitha kunye neemfuno zakho.
Ukugcinwa kweGaraji ngokulula kunika zonke iintlobo zeenkqubo zokugcina igaraji ezinjengeekhabhathi, iidrowa kunye neeshelfu. Ngaphandle kwezi, zikwanazo izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo ezinjengeebhasikithi, imigqomo, amagwegwe e-slatwall, njl.
Inye inzuzo enkulu yesoftware yoyilo lwegaraji elula kukuba iyenza yonke inkqubo yoyilo ibe nzima- ekudaleni ubeko lokugcina kwakho ukuyalela kunye nofakelo. Nantoni na oyikhethayo kwikhathalogu yabo ibandakanya inkcazo epheleleyo kunye nokubalulwa kunye namaxabiso. Nje ukuba ukhethe yonke into oyifunayo, iindleko zizonke zenkqubo yakho yokugcina igaraji zibonisiwe kwiscreen, ke sele unawo umbono wento oyifunayo ukulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali.
I-Virtual Architect ingasetyenziselwa ukuyila nayiphi na indawo yekhaya lakho, kubandakanya igaraji yakho. Le software ifumaneka kwiinguqulelo zasimahla nezihlawulelweyo, kodwa eyokugqibela inezinto ezininzi. I-Visual Architect ingasetyenziselwa ukuyila iiplani ze-2D kunye nemidwebo yefomathi ye-3D. Le software yoyilo kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni naliphi na amava obuchule. Iwebhusayithi yabo ikwabonelela ngeevidiyo zokufundisa ezinokukunceda ukuba uqalise ngeprojekthi yakho.
Ukwenza isicwangciso somgangatho usebenzisa le software yoyilo akunzima. Inika ukhetho lokuba uqale ukudweba ukusuka ekuqaleni okanye usebenzise uyilo lwewizard. Ngale nto, ungalayisha ifoto yegaraji yakho kwisoftware eza kuhlalutywa yile wizard yoyilo. Iwizard yoyilo emva koko ivelise ngokuzenzekelayo uyilo onokuluhlengahlengisa ngokweemfuno zakho. Iimpawu zomntu ngamnye zoyilo ezinje ngobukhulu, ukuphakama kodonga kunye nobubanzi bunokulungiswa kunye nezinye izinto ezinje ngeengcango, iifestile, izinto zokugcina kunye nefenitshala zinokongezwa xa usendleleni. Izixhobo kunye nokugqitywa kwazo kungabandakanywa kwimidwebo yakho ukwenzela ukuba icaciswe ngakumbi.
Unokusebenzisa i-Visual Architect ukwenza umbono we-3D wesicwangciso sakho segaraji. Ukukhanyisa, izithunzi kunye nokubonakaliswa kunokuphinda kongezwe ukuvelisa umbono ongakumbi wegaraji yakho. Ngaphandle kwe-3d, ukuhamba ngokuhamba kuyo yinto enye yebhonasi yoYilo oluqinisekileyo.
(Isoftware okwangoku ngaphandle kweintanethi) Indawo: https://www.americangaragebuilders.com/
Abakhi beGaraji laseMelika yinkampani esekwe eWisconsin nase-Illinois egxile kuyilo lwegaraji, ukubonisana kunye nolwakhiwo. Bavelise eyabo isoftware esekwe kwinkqubo yokunceda abathengi ukuba benze ulwakhiwo lwegaraji ngokweemfuno zabo kunye namava enkqubo yoyilo kuqala.
I-American Garage Builders Designer ikuvumela ukuba wenze umbono ophezulu okanye isicwangciso somgangatho we-2D kwigaraji yakho kwaye ubeke ezinye izinto kuyilo kuyo ukuze ibe nokucaciswa ngakumbi. Unokukhetha ubungakanani begaraji yakho emva koko urhuqe izixhobo zangaphambili kwisicwangciso sakho njengezithuthi ezahlukeneyo, iibhayisekile, izithuthuthu kunye nezinye iziqwenga zefanitshala ezinjengeebhentshi kunye nokugcinwa. Ukongeza, unokubeka iifestile kunye neengcango ngokweemfuno zakho zesayizi ngokukhetha kwilayibrari yazo.
I-American Garage Builders Designer yisoftware efanelekileyo kakhulu kubaqalayo. Kulula ngokulula kwaye kulula ukusebenza nayo ke sisoftware elungileyo ukuqala ukusebenza nayo. Le nkqubo yoyilo ayinangcaciso kwaye ihambele phambili njengesoftware ekhankanywe apha, nangona kunjalo, isebenza kakuhle ekunikezeni umbono opheleleyo, ukubonwa kunye nolwakhiwo lwendlela ofuna igaraji yakho ibukeke ngayo.
Le software ikwajolise ngakumbi ekulungiseleleni igaraji yakho kwaye yenzelwe ngokukodwa ukucwangcisa iiprojekthi zokwakha igaraji.
Ngaphandle kwesoftware yoyilo yasimahla efumanekayo yokukhuphela kwi-Intanethi, unokukhetha ukuthenga isoftware yoyilo lwegaraji. Kodwa, kutheni ufuna ukusebenzisa ingxelo ehlawulelweyo, ukuba ungawenza umzobo wakho usebenzisa uhlobo lwasimahla? Ngamanye amaxesha, unokufuna izicwangciso ezithe kratya kunye neseti epheleleyo yemizobo yokusebenza ukugqiba iprojekthi yokulungisa kwakhona.
Ngokubanzi, umahluko ophambili phakathi kweenkqubo zesoftware yoyilo oluhlawulelweyo kunye neenkqubo zesoftware yoyilo ziimpawu zazo. Iinkqubo eziqhubele phambili ziya kukuvumela kungekuphela ukuba wenze iiplani ezilula ze-2d kunye nemizobo esisiseko ye-3D, kodwa endaweni yoko inokusetyenziselwa ukwenza imizobo yokusebenza yobugcisa egqibeleleyo, imbonakalo ye-photorealistic ye-3D kunye nokuhamba ngokuhamba.
Nalu uluhlu lweProjekhthi yasimahla yeGaraji yoyilo onokuyisebenzisa kwiimfuno zakho ezahlukeneyo:
Sketch Up Pro sesinye sezixhobo zoyilo ezicetyiswayo ezisetyenziswa ngabaqulunqi, abakhi bezakhiwo kunye namagcisa. Inika amanqaku afanayo anohlobo lwasimahla, kunye nezinye ezininzi. Sketch Up Pro ibandakanya zombini inkqubo ye-2d kunye ne-3D ekuvumela ukuba wenze izicwangciso zomgangatho kunye neembono. Esi sicelo siyilo sine-plug ins ezifumanekayo zokukhuphela ezinje ngezixhobo zokukhanyisa, iireververs kunye neVray. Iiplagi ins zinceda ukuphucula umbono wesicwangciso sakho usebenzisa ukubonakaliswa, izithunzi kunye neziphumo zokukhanyisa. Uya kumangaliswa sisiphumo se-Photorealistic Sketch Up pro esinokudala.
Kumntu onemvelaphi eyoneleyo kwizicelo zekhompyuter, iSketch Up Pro kulula ukuyisebenzisa kwaye nokuphuhlisa isicwangciso somgangatho kwaye i-3D inokufundwa ngokulula. Okokuqala, ungaqala ngokwenza umbono ophezulu okanye isicwangciso somgangatho wendawo yakho ngokungena kubungakanani kunye nokusebenzisa isixhobo somgca-i icon ekhangeleka njengepensile. Ke xa ugqibile uyilo, ungaqala ukukhupha iindonga usebenzisa i-Push okanye i-icon.
Ukongeza ezinye izinto kuyilo kwi-Sketch Up pro kulula kakhulu kuba endaweni yokuzoba into nganye ekuqaleni, unokukhetha ukukhuphela ukugcinwa, iziqwenga zefanitshala, izixhobo, izixhobo kunye nezinye izinto ezivela kwigumbi labo le-3D (ilayibrari yeemodeli ezikhoyo ukuze zisetyenziswe Kwaye ukwenza imodeli yakho ibe yinyani ngakumbi, ungongeza iinkcukacha zokugqibezela njengepeyinti okanye izinto ezahlukeneyo ezisebenzisa ithala leencwadi.
Esi sicelo asiyonkqubo esekwe kwiwebhu, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uyikhuphele kwaye uyifake kwikhompyuter yakho. Ukongeza, awunyanzelekanga ukuba uqhagamshelwe kwi-intanethi ukuze uyisebenzise. Ngohlobo lwePro, ungathumela kwelinye ilizwe ezinye iifomathi ezinje ngeCAD kunye nePDF kwaye uvelise imizobo yokusebenza yolwakhiwo. Ezinye izinto ezizodwa zikwenza ukuba uvelise uluhlu, wenze iingxelo kunye nokuthumela ngaphandle iividiyo zoopopayi. Ukuhamba ngeendlela kunokwenziwa kusetyenziswa nayiphi na imodeli ye-3D oyilileyo.
IgumbiSketcher sisixhobo soyilo sasekhaya onokuthi usisebenzise ukwenza iiplani zomgangatho kunye neembono. Ikwavumela ukuba uhombise, unikeze kwaye ufikelele kulungelelwaniso lwakho ukuze ukwazi ukubona kakuhle kwi-3d. Ngelixa ungayizama simahla, ingxelo ehlawulelweyo inikezela ngeempawu ezipheleleyo zokwenza i-3d yakho ibe yeyokwenyani.
I-RoomSketcher ngokusisiseko ibonelela ngezinto ezintathu, (1) yenza umgangatho ophakamileyo we-2D kunye ne-3D Plans, (2) zivelise iifoto ezimangalisayo nezinyani ze-3D kunye ne-360 Views kwaye (3) zivelise iindlela ezihambelanayo ze-3D.
Ukuyila kunye nokuzoba iiplani zomgangatho kulula, kodwa ukuba awunalo ixesha lokuzenza ngokwakho, Igumbi leSketcher linenkonzo eyongezelelweyo eyenza ukuba izicwangciso zakho zomgangatho we-intanethi zikwazi ukwenza umzekeliso oyingcali. Kufuneka ulayishe umzobo okanye iplani yegumbi lakho okanye ikhaya kwaye ulindele ukuba nesicwangciso esilungisiweyo silungele usuku olulandelayo.
Imizobo onokuthi uyenze kwiGumbiSketcher nayo ineenkcukacha. Izicwangciso zomgangatho we-2D zinemilinganiselo, ubungakanani kunye neendawo. Izicwangciso ze-3D zinokuveliswa ngochukumiso olulula lweqhosha kwaye imifanekiso enesiphumo iyinyani. Unganikezela kwaye uhombise isicwangciso sakho ngeendlela ezahlukeneyo, imibala, izixhobo kunye neefenitshala. Ngaphandle kwe-2D kunye ne-3D, i-Room Sketcher ikwakhona ukubonwa kwe-panoramic yeplani yakho ye-360, ukuze ube nakho ukubona indawo yakho ngakumbi. Kodwa ukuba ufuna amava apheleleyo, unokuvelisa ukuhamba ngokuKhanya kwe-3D kwisicwangciso sakho somgangatho. Eli nqaku libonelela ngendlela yokunxibelelana malunga nokutyelela iprojekthi yakho.
Igumbi leSketcher liyafumaneka kwiinguqulelo ezisimahla nezihlawulelweyo kwaye zinokusetyenziswa kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi kwikhompyuter, ithebhulethi okanye nasiphi na isixhobo esiphathwayo. Ikwavumela ukuba uvumelanise imisebenzi yakho kwizixhobo ezahlukeneyo ngefu ukuze ukwazi ukufikelela kuyo nanini na kwaye naphi na. Unokukhuphela imisebenzi yakho kwiifomathi ezahlukeneyo, unayo kwizikali ezininzi kwaye uyinikeze kwiinguqulelo ezikumgangatho ophezulu ukuze uprinte ngakumbi ifoto.
Umyili we-Elecosoft 3D yoyilo lweKhaya sesinye isixhobo sokwenza ukuba ukwazi ukwenza zombini iiplani ze-2D kunye neembono ze-3D. Njengazo ezinye izinto ezikhanyayo ezikhankanyiweyo, inenguqulo yasimahla kunye nehlawulelweyo- eyokugqibela ivula amanqaku anokukunceda uvelise imizobo eneenkcukacha. Isoftware kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni lwazi nge-CAD, isenza ukuba ibe sesinye sezixhobo ezisetyenziswa kakhulu kuyilo ngabo bobabini abaqeqeshi bokuyila kunye nabathandi ngokufanayo.
Ukwenza isicwangciso somgangatho usebenzisa i-3D Architect kulula. Unokuzoba iindonga nganye nganye okanye usebenzise amanqaku abo angaphambi kokucofa ngokucofa kunye nokutsala. Isoftware yoyilo ikwanayo nefayile ye- umhleli wodonga oluphambili ekuvumela ukuba wenze isithuba esilingana nazo zonke iimfuno zakho. Umhleli ukuvumela ukuba uhlengahlengise izinto kunye neeparameter ezinje ngobukhulu beendonga, iingcango kunye neefestile. Ngaphandle kohlelo lodonga, i-3D Architect ikwanento yokwenza uyilo lwesiko. Ukongeza, unokwenza izinto ngokwezifiso, ukugqiba, ukuthungwa kunye nemibala, ngokunjalo. Nje ukuba ubeko lwe-2D kwi-3D Architect, ungayiguqula ibe ngumbono we-3D ngonqakrazo nje lweqhosha.
Eyona nto intle malunga ne-Elecosoft 3D Designer yaseKhaya kukuba inecandelo elinikezelwe kuyilo lwegaraji. Njengaso nasiphi na isithuba, unokwenza umzobo opheleleyo wegaraji yakho ukuze ujonge ngononophelo ukuba uza kubonakala njani.
UMyili oyiNtloko woYilo lweKhaya sesinye isixhobo esikhulu sokuyila onokuwusebenzisa ukufumana umbono opheleleyo weyakhoizicwangciso zoyilo lwasekhayakunye nemizobo yokusebenza, kubandakanya igaraji yakho. Ikwabonelela ngobume be-2D kunye nemibono ye-3D kwimini nasemini.
UMyili oyiNtloko woMyili weKhaya unenguqulo yepremiyamu okanye uguqulelo oluhlawulelweyo olunenkxaso epheleleyo yamagumbi ahlukeneyo, kubandakanya negaraji. Ngaphandle kwenguqulo ehlawulelweyo nesimahla, uMyili oyintloko kuphela kwesoftware ekuvumela ukuba uqeshise isoftware. Ukuqesha isoftware kukwenza ukuba ukwazi ukusebenzisa onke amanqaku emveliso kodwa kuphela ixesha elimiselweyo. Olu khetho lubiza imali encinci kunokuthenga yonke imveliso.
Nge-Chief Architect, unokuyila iiplani zomgangatho kwaye uhlengahlengise iindonga kunye nezinto ezifana neefestile neengcango. Ezinye iiparameter ezinje ngobude kunye nobude, ubude kunye nobukhulu nazo zinokulungiswa. Ikwanazo nezicwangciso esele ziyilelwe ezenza ukuba umsebenzi wakho ubelula. Ukongeza, isoftware ikwenze uhlengahlengiso oluzenzekelayo eluphahleni, ekubiyweni nasekwenzeni izicwangciso zakho ukuba wenza utshintsho ezindongeni.
Imizobo ye3D inokwenziwa ngokulula kusetyenziswa izixhobo ezahlukeneyo zoyilo ezibonelelwa nguMyili oyiNtloko. Kungenxa yokuba le nkqubo ikuvumela ukuba ungeze izinto, uburhabaxa kunye nemibala kwimizobo kunye neembono zakho, iziphumo ze-3D ezibonakalayo ziyinyani kwaye zibonakala zinomtsalane.
Xa kuziwa kwiigaraji, uMyili oyiNtloko unecandelo elinikezelwe kuphela kolu hlobo lwendawo. Ngaphandle kwezicwangciso zomgangatho ophetheyo ngaphambili, unokukhetha ubungakanani bezithuthi, ukugqitywa kwezinto kunye nezinto onokuzongeza kwimizobo. Izinto, nangona zibonakala, zisekwe kubungakanani bokwenyani, ke unoluvo oluchanekileyo lokuba izinto eziza kulungiswa, ukugcinwa kunye neekhabhathi kwigaraji yakho ziya kuthatha indawo.
Enye into ebalulekileyo yoYilo lweNtloko kukubala iindleko. Inika uqikelelo lweendleko ezinokubakho zeprojekthi yakho ngokusekwe kwizinto ozongezayo kwisicwangciso sakho somgangatho.
amaqhuma ezincakuba kwimigca yebhikini
I-Virtual Architect ingasetyenziselwa ukuyila onke amalungu ekhaya lakho, kubandakanya igaraji. Njengazo zonke iinkqubo zesoftware ekhankanywe apha ngasentla, esi sicelo sikuvumela ukuba wenze iiplani zomgangatho, uyilo kunye nokuvelisa imizobo ye-3D, iimbono kunye nokuhamba-hamba.
Nangona kunjalo, inqaku elinye elibeka i-Visual Architect ngaphandle kwezinye kukuba ine-Wizard yoyilo. Ngale nto, unokufaka ifoto kwigaraji yakho esele ikho kwinkqubo kwaye uyihlalutye. IWizard yoyilo ikunika umbono olinganisiweyo wolwakhiwo lwegaraji yakho esele ikho. Emva koko, unokuhlengahlengisa ngokulula ezinye iinkcukacha kunye neempawu zesithuba sakho ngokusekwe kwiimfuno zakho, iinkcukacha kunye nezinto ozikhethayo.
Iwebhusayithi ye-Virtual Architect ibalaselisa izinto ezintathu eziphambili zesoftware ezizezi: (1) umzobo, (20 yenza ngokwezifiso kwaye (3) unikeze. Inkqubo ivumela ukwenza umzobo kwaye uzobe amagumbi amatsha ngokurhuqa ngokulula kunye nolahleko. Ezinye izinto zoyilo ezinje nge Iingcango zegaraji kwaye iifestile zinokongezwa kwimizobo yakho kwaye unokukhetha kwiindidi ezahlukeneyo zeminyango kwilayibrari yayo, njengokutyibilika, isiFrentshi, ukugoba kabini, nkqu neminyango yegaraji. Okufanayo kuya kwiifestile- khetha naluphi na ubungakanani okanye naluphi na uhlobo, njengokuxhoma, ukutyibilika, ibay, okanye ukuthandwa.
Nje ukuba wongeze icandelo lakho loyilo kwisicwangciso sakho segaraji, unokwenza imizobo yakho icaciswe ngakumbi ngokwenza izinto ngendlela eyiyo kunye nokugqitywa okunje ngeekhabhathi, ukukhanya, ukugqunywa kweefestile, ukutyibilika, ipeyinti nokunye. Ithala leencwadi elibanzi libandakanya ipeyinti, amabala, kunye namalaphu avela kwimveliso yesizwe ekhokelayo. Ukongeza, ifanitshala, izixhobo zombane, izixhobo zombane kunye nezinto ezinokulungiswa nazo zinokukhethwa kwaye zibekwe kwimizobo yakho.
Uyilo olubonakalayo lunokuguqula isicwangciso sakho somgangatho we-2D sibe yimizobo ebalaseleyo ye-3D. Isoftware inikezela uyilo lwakho kwifoto esengqiqweni kwaye inokusetyenziselwa ukwenza ifayile ye-Ukuhamba nge-3D okanye ukhenketho olubonakalayo lwendawo yakho ukuze ufumane amava apheleleyo.
Nge-Architect ye-Visual, unokungenisa naluphi na uhlobo lwefayile ngqo kwisoftware. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba sele unesicwangciso esele sikhona okanye ifayile ye-CAD. Ikwenzile ngokuzenzekelayoIzicwangciso zesitayileke unesicwangciso esifanelekileyo sokulandela emva kokuba ukulungiswa kwegaraji yakho kusenzeka.
Uyilo lweSmartDraw yinkqubo yekhompyuter egxile ngakumbi kwimizobo ye-2D njengeeplani, iiplani zomgangatho kunye neminye imizobo esebenzayo yokwakha. Uyilo lweSmartDraw lunokusetyenziswa njengenye indlela eya kwi-Auto CAD enzima ngakumbi. Isoftware yoyilo lwesakhiwo isisiseko ngakumbi kwaye kulula ukuba nabani na ayisebenzise- nokuba yeyabaqalayo kunye nabo bangenalo ulwazi lwangaphambili kwezinye izixhobo zoyilo. Ingafakwa kwikhompyuter okanye kwithebhulethi kwaye inenqaku lokulingwa lasimahla elinokukhutshelwa kwi-intanethi.
Ngoyilo lweSmartDraw, unokwenza ngokulula kwaye ngokukhawuleza wenze iiplani zomgangatho usebenzisa inani leetemplate ezifumaneka ngokulula ukuhlela. Unokukhetha eyona ikufutshane kwiprojekthi yakho kwaye uyilungelelanise kwaye uyenze ngokwezifiso ngokweemfuno zakho kunye neemfuno zakho.
I-SmartDraw ikwenza ukuba ukwazi ukwenza isicwangciso somgangatho esipheleleyo, esineenkcukacha kunye nokuma kwendawo yakho, kubandakanya negaraji yakho. Ungaqala ngoyilo olusisiseko olubandakanya zonke izichasiso ezibalulekileyo, eyakho ubungakanani begaraji kunye nemilinganiselo enjengobude beendonga, ubukhulu beefestile neengcango kunye nendawo iyonke yendawo. Unokongeza ezinye izinto zokwakha ezinje ngeengcango kunye neefestile. Ukusuka kuloo mzobo usisiseko, unokukhulisa ubeko lwefanitshala usebenzisa amawaka eempawu esele zenziwe onokuzifumana kwilayibrari yazo ebanzi. Imibhalo kunye nezinye izinto zeendonga, imigangatho kunye neekhawuntari ziyafumaneka kwi-SmartDraw.
Ngokwezakhiwo zegaraji kunye nemizobo, izinto ezizodwa ezinje ngeeyunithi zokugcina, iikhabhathi okanye iibhokisi zezixhobo zinokongezwa kwisicwangciso sakho. Inkqubo ikunika ulawulo olupheleleyo; ngendlela onokwenza ngayo ukuba uyilo lwegaraji lusebenze ngakumbi, lusebenze kwaye lufanele iimfuno zakho.
Izixhobo zoyilo zeSmartDraw zonke kulula ukuzisebenzisa, ubukhulu becala zifuna kuphela ukutsala kunye nokulahla isenzo osisebenzisayo. Iindonga ziyaqhekeka kwaye zilungelelanise ngokulula, ke imizobo yakho ichanekile kwaye iyakhawuleza ukugqiba, xa kuthelekiswa nokulungelelanisa iindonga nganye nganye.
I-CADPro yenye isoftware eyaziwayo yokuyila enokusetyenziselwa ukwenza elula kwimizobo yokusebenza eqhubele phambili yoyilo lwasekhaya, uyilo loomatshini kunye nobuchwephesha kunye nokuhombisa umhlaba. I-CADPro ineenketho ze-2D kunye ne-3D Esi sixhobo siyilwa ngoncedo lwekhompyuter sinokusetyenziselwa onke amalungu ekhaya, kubandakanya negaraji yakho. Lukhetho olufanelekileyo ukuba ujonge ukuvelisa imizobo esemgangathweni yokusebenza kwegaraji.
I-CADPro ine-interface enobuntu yomsebenzisi kwaye ibandakanya uluhlu olubanzi lwezixhobo zoyilo ezinomdla. Ukuqala isicwangciso somgangatho kulula kuba kukunika ukhetho lokukhuphela izicwangciso zasimahla kunye neeprojekthi onokuthi uzilungelelanise kwaye uzenze ngokwezifiso izicwangciso esele zikho zekhaya lakho okanye iimfuno zakho zokuhlengahlengisa kunye neenkcukacha. Ngaphandle koku, unokukhetha indawo yokuKhangela weSketch, ekuvumela ukuba ulandele umzobo osele ukhona. Ufuna nje ukuzoba uyilo lwasekhaya kwisiqwengana sephepha emva koko uskene. Inkqubo emva koko iguqula umzobo oskeniweyo ube yitemplate elandekayo onokuyiguqula.
Enye into ebalulekileyo ye-CADpro kukuKhangela ifoto, ephantse yafana nokulandelwa kwesketshi, kodwa endaweni yokufaka umzobo, olu khetho lufuna ukuba ulayishe ifoto yendawo ofuna ukuyila. Yitsho ukuba ujonge ukuyila igaraji yakho, kufuneka nje uyifote usebenzisa ikhamera yedijithali okanye i-smartphone, ungenise ngaphakathi kwisoftware emva koko uyiguqulele kwitemplate elandekayo.
Ukwenza isicwangciso sakho sichaze ngakumbi, unokongeza izinto zesiko ezifana nefenitshala, ukugcinwa, ukulungiswa kunye nezixhobo. Iiparameter zomzimba ezinje ngemilinganiselo kunye nemilinganiselo nazo zingongezwa ukwenza umzobo wakho osebenzayo ube lula ukuwuqonda.
Ngaphandle kwezicwangciso ze-2D, ungasebenzisa kwakhona i-CADPro yeembono ze-3D ezikunika indlela eneenkcukacha ngakumbi kwaye iyinyani kuyilo lwegaraji. Ngolu khetho, unokuqonda ngokupheleleyo ukuba indawo iya kuvela njani yakhiwe.
Ndwendwela eyethu Ushintsho lwegaraji iphepha ukubona ezinye izimvo ezinxulumene nesi sihloko.
(1) Tmib ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
amagama asisipho semali yesipho somtshato
amakhonkco okuzibandakanya okwesafire aluhlaza
indlela yokwenza izaphetha kwizithsaba